Hong Kong Tower is a 5 esondweni slot umdlalo enikeza onqobayo omkhulu izici ezihlukahlukene ibhonasi in the game. Lokhu Slots khulula osebenzisa yekhasino Umdlalo isekelwe enhle isihloko kwemibhoshongo esiphakeme kunazo zonke kathathu emzini kaMasipala ka-Hong Kong. Ngemuva komuzi ngezansi umbhoshongo omkhulu umsindo omoya, traffic ngezansi futhi amaphoyisa / ambulensi kwakhala ukwenza izakhi ephelele le timu. Kukhona cool nemisindo nabanye umculo lapho itolitji spin. Lo mdlalo udlalwa nge ukubheja mali £ 0.20 ukuze £ 100 ukuthi kukhona imiz & max yomdlalo.
Mayelana unjiniyela Hong Kong Tower:
Lokhu Yingakho Slots khulula osebenzisa yekhasino umdlalo yasungulwa ngu Elk, elinye lamaphayona e yekhasino slot umkhakha nge imidlalo eziningana ezithandwayo ukuthi adlalwa emhlabeni jikelele. imidlalo yabo zidalwe usebenzisa yesimanje amageyimu ubuchwepheshe evumela abasebenzisi ukudlala kuwo kunoma iyiphi ikhompyutha noma idivayisi yeselula.
Lolu amazing Slots khulula osebenzisa yekhasino umdlalo udlalwa izimpawu ezifana bonsai isihlahla, igolide wanezelwa 7, pink-lotus nedayimani. 7 e igolide ukubaluleka phezulu uphawu nge 1500 izikhathi esigxotsheni yakho ukuba won 5 Ukubonakala kumugqa asebenzayo. Kukhona izimpawu ezinhlanu okungahleliwe Chinese osuselwe kukhona ongaphakeme-value abathandekayo. Uphawu umdlalo logo, esiluhlaza-yin-yang, kanye obomvu-yin-yang kukhona ibhonasi izimpawu ezintathu lo slot game.
Mystery Ibhonasi: I-logo mdlalo uphawu imfihlakalo futhi iyaqhubeka ibizwa ngokuthi ngaleyo ndlela ngoba awazi ukuthi yini uphawu zembula ku emva itolitji ayeke ukuphotha. izinombolo Multiple lezi izimpawu kungembula uphawu ephezulu eziqakathekileko onqobayo elikhulu noma ibe blue-yin-yang ibhonasi ukuthi ingavula jackpot ohlangothini umdlalo ngezigxobo omkhulu ngokuthatha.
Chitha Ibhonasi: I-red-yin-yang liwuphawu chitha lokhu Slots khulula osebenzisa yekhasino umdlalo and lihlala ezintathu noma ngaphezulu lokhu kuzophazamisa ukuqalisa ibhonasi game entry. lihlala ezine noma ezinhlanu ngeke ngikunike ukuphila elilodwa noma amabili extra izosetshenziswa jackpot eziyindilinga ikuvumela ukuqhubekisela phambili wena amazinga olandelayo.
Ibhonasi Sky Amasondo: Kukhona ngamasondo amathathu phezu kwemibhoshongo, ngasinye emazingeni ahlukene ngezigxobo ukuba inganqotshwa. Oluhlaza ovuthayo isondo inikeza ngezigxobo kusuka 200 ukuze 2000, green isondo izipesheli 500 ukuze 10,000 futhi isondo zokugcina obomvu inikeza ezigxotsheni enkulu 2000 ubuncane 50,000.
Isifinyezo: Lolu amazing Slots khulula osebenzisa yekhasino Umdlalo iza omkhulu Yokuwina ezigxotsheni ukuthi kulemithi engenza umuntu azwe i isicebi osheshayo uma uwine ne max ukubheja inani £ 100.
Ihlengethwa Igolide Stellar jackpots